ओम नमः शिवायको शुभकामना
२१ असोज, हेटौँडा । हेटौँडा–४ स्कूलरोडमा रहेको न्यू ओमनमः शिवाय पत्रपत्रिका सेन्टरले शुक्रबार शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम गरेको छ । सेन्टरले विजयादशमी, शुभदिपावली, नेपाल सम्बत र छठको अवसरमा संचारकर्मीहरुसँग शुभकामना आदानप्रदान गरेको हो । कार्यक्रममा ओम नमः शिवाय पत्रपत्रिका सेन्टरका संचालक बाबुराम खतिवडा, नेपाल पत्रकार...
चेतनशिलको बार्षिक साधारण सभा
२१ असोज, हेटौँडा । हेटौँडा–२० मा रहेको चेतनशिल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको २० औं बार्षिक साधारण सभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । साधारण सभामा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद घिमिरेले संस्थागत प्रतिवेदन, लेखा समिति संयोजक गोपालप्रसाद बस्ताकोटीले आर्थिक प्रतिवेदन, बचत तथा ऋण उपसमितिका संयोजक विष्णुमान श्रेष्ठले बचत समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत...
सांसद बानियाँद्वारा खानेपानी उद्घाटन
२० असोज, हेटौँडा । मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ का सांसद एवं नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले विहिबार खानेपानी योजनाको उद्घाटन गरेका छन् । हेटौँडा–२० मा रहेको गैरीगाउँमा निर्माण सम्पन्न खानेपानी योजनाको सांसद बानियाँ र नेकपा एमालेका केन्द्रिय सल्लाहकार घनप्रसाद गौतमले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन्...
प्रेस सेन्टरले गर्यो चियापान
१९ असोज, हेटौँडा । प्रेस सेन्टर नेपाल मकवानपुरले विजया दशमी, शुभदिपावली, छठको अवसरमा बुधबार चियापान तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम गरेको छ । सोसाईटीका जिल्ला अध्यक्ष नानीमैया विष्टको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रकी जिल्ला इन्चार्ज कुमारी मोक्तान, प्रेस सेन्टरकी जिल्ला सचिव अञ्जली थापा, ३ नम्बर...
सामुदायिक बन महासंघको शुभकामना कार्यक्रम
१९ असोज, हेटौँडा । सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ मकवानपुरले बिजया दशमी, शुभ दिपावली, छठ पर्व र नेपाल सम्बत्को नयाँ बर्ष ११३७ को शुभकामना आदनप्रदान कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रम जिल्ला बन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्य तथा सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ मकवानपुरकी अध्यक्ष पञ्चमायाँ स्याङ्गतानको...
नेपाल प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान
१९ असोज, काठमाण्डौ। नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अन्तराष्ट्रिय सम्मान पाएको छ ।सन् २०१६ को वन्यजन्तु अपराधविरुद्धको सम्मान दिइएको हो । दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा आयोजित कार्यक्रममा वितरण गरिएको हो । सन् २०१० देखि नेपालमा वन्यजन्तु चोरी शिकारीविरुद्ध विभिन्न अपरेशन सञ्चालन गरी उल्लेखनीय काम गरेबापत ब्यूरोले...
चौघडामा पशु स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तरक्रिया
१९ असोज, हेटौँडा । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय मकवानपुरको आयोजनामा हेटौँडा–६ चौघडामा पशुसम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । विश्व पशुपंक्षी दिवसको अवसरमा ‘पशुपंक्षीको मौलिक स्वतन्त्रता’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया भएको हो । रानी सामुदायिक वनको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा कार्यालयका प्रमुख डा. रामप्रकाश प्रधान, डा. सञ्जीवकुमार ठाकुर, पशु...
१८ असोज, हेटौँडा । रोटर्याक्ट क्लव अफ मकवानपुरले विजयादशमी, शुभदिपावली, नेपाल सम्बत र छठको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापन कार्यक्रम गरेको छ । रोटरी क्लव अफ मकवानपुरका संस्थापक अध्यक्ष ज्ञानकृष्ण प्रजापतीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रमका प्रजापतीले रोटर्याक्ट रोटरीको सहयोगी मात्र नभई साथी भएको बताउँदै यसले...
वन क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न
१७ असोज, हेटौँडा । जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ । जिल्लाका वन क्षेत्रसँग सरोकारवाला निकाय रहेको समितिको बैठक मनहरीमा भएको हो । बैठकमा जिल्ला वन कार्यालयका सूचना अधिकृत विशाल भट्टराई, पशु सेवा कार्यालयका पशु विकास अधिकृत रामकृष्ण यादव, जिल्ला कृषि कार्यालयका कृषि प्रसार अधिकृत काशीराज हमाल, जल उत्पन्न...